JW Usoro Ihe Omume Ọmụmụ Ihe Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ Febụwarị 8-14, 2016
Nehemaya Ji Ofufe Chineke Kpọrọ Ihe
Nehemaya Bụ Ezigbote Onye Nlekọta
Ndị Ji Obi Ha Niile Na-efe Jehova Na-akwado Ihe Niile Gbasara Ofufe Ya
Ndụ Kacha Mma Mmadụ Nwere Ike Ibi
Ihe Akwụkwọ Nehemaya Na-akụziri Anyị
Kpọọ Ndị Niile Nọ́ n’Ókèala Unu Òkù Maka Ncheta Ọnwụ Jizọs
Febụwarị 29–Mach 6
Esta Gbachiteere Ndị Chineke
USORO IHE OMUME—OZI ANYỊ NA OTÚ ANYỊ SI EBI NDỤ FEBỤWARỊ 2016
“Nehemaya Bụ Ezigbote Onye Nlekọta”: (Nkeji 10)
Nehe. 5:1-7—Nehemaya gere ndị Izrel ntị tupu ya emewe ihe (w06 2/1 9 ¶2)
Nehe. 5:14-19—Nehemaya dị umeala n’obi, ọ naghị achọ ọdịmma onwe ya naanị, ọ dịkwa akọ (w06 2/1 10 ¶4)
Nehe. 8:8-12—Nehemaya gbasiri mbọ ike ka a na-akụziri ndị Izrel Okwu Chineke (w06 2/1 11 ¶4)
Nehe. 6:5—Gịnị mere Sanbalat ji zigara Nehemaya “akwụkwọ ozi a na-emechighị emechi”? (w06 2/1 9 ¶3)
Nehe. 6:10-13—Gịnị mere Nehemaya ji jụ ime ihe Shemaya gwara ya mee? (w07 7/1 30 ¶15)
Ọgụgụ Baịbụl: Nehe. 6:14–7:7a (Nkeji 4 ma ọ bụ ihe na-erughị ya)
Ozi Ụlọ n’Ụlọ: (Nkeji 2 ma ọ bụ ihe na-erughị ya) Ihe ngosi. Jiri isiokwu Teta! Nke 1, 2016 zie mmadụ ozi ọma. Gwakwa onye ahụ ihe unu ga-atụle n’oge ọzọ.
Nletaghachi: (Nkeji 4 ma ọ bụ ihe na-erughị ya) A ga-eme ihe ngosi otú a ga-esi gaa nletaghachi na nke onye ahụ natara Teta! Gwakwa ya ihe unu ga-atụle n’oge ọzọ.
Ọmụmụ Baịbụl: (Nkeji 6 ma ọ bụ ihe na-erughị ya) A ga-eme ihe ngosi ebe e ji akwụkwọ Baịbụl Na-akụziri Anyị, isi nke 3, paragraf nke 4 na nke 5 amụrụ mmadụ ihe.
Abụ nke 62
Ị̀ ‘Na-agbalị Ka I Ruo Eruo’?: (Nkeji 15) Okwu okenye ga-ekwu. Ọ ga-esi n’Ụlọ Nche Septemba 15, 2014, peeji nke 3-6. Kpọnye vidio bụ́ Ụmụnna Ndị Nwoke, Gbaanụ Mbọ Ka Unu Ruo Eruo Ịrụ Ọrụ Ọma, nke e gosiri n’Ihe Omume Tiivi Ndịàmà Jehova nke ọnwa Disemba afọ 2015. Chetara ụmụnna na ihe mere anyị ga-eji ruo eru abụghị ka e nye anyị ọkwá. Kọwakwaara ha ihe ga-enyere ụmụnna nwoke aka iru eru. Gbaa ụmụnna ndị nwoke ume ka ha gbalịa ruo eru ịbụ ohu na-eje ozi ma ọ bụ okenye.
Ọmụmụ Baịbụl Ọgbakọ: ia isi nke 8 ¶17-27, na igbe dị na peeji nke 75 (Nkeji 30)
Abụ nke 125 na Ekpere
Ihe Ndị Anyị Ga-amụ n’Ọmụmụ Ihe A Na-akpọ Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ Maka Febụwarị 8-14, 2016
mailto:?body=Ihe Ndị Anyị Ga-amụ n’Ọmụmụ Ihe A Na-akpọ Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ Maka Febụwarị 8-14, 2016%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D202016043%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Ihe Ndị Anyị Ga-amụ n’Ọmụmụ Ihe A Na-akpọ Ozi Anyị na Otú Anyị Si Ebi Ndụ Maka Febụwarị 8-14, 2016
FEBỤWARỊ 2016 USORO IHE OMUME—OZI ANYỊ NA OTÚ ANYỊ SI EBI NDỤ
mailto:?body=FEBỤWARỊ 2016 USORO IHE OMUME—OZI ANYỊ NA OTÚ ANYỊ SI EBI NDỤ%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fpub%3Dmwb16%26issue%3D201602%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=FEBỤWARỊ 2016 USORO IHE OMUME—OZI ANYỊ NA OTÚ ANYỊ SI EBI NDỤ